News - သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး ဂိုဒေါင်
သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး သိုလှောင်ရုံကိုယေဘုယျအားဖြင့်သံမဏိကိုယ်ထည်၊ သံမဏိတိုင်များ၊ ဤရွေ့ကားအဓိကအစိတ်အပိုင်းများဂိုဒေါင်၏ဝန် - ဆောင်သောဖွဲ့စည်းပုံဖွဲ့စည်းရန်။ အလေးချိန်ပေါ့ပါးခြင်းနှင့်လွယ်ကူစွာဆောက်လုပ်ခြင်းကြောင့်သံမဏိကိုယ်ထည်သိုလှောင်ရုံသည်အလွန်လိုအပ်သည်။ သံမဏိအဆောက်အအုံသည်စီမံကိန်းများစွာအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်အဆောက်အအုံအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ရေရှည်စီးပွားရေးအရစဉ်း စား၍ သံမဏိဂိုဒေါင်များကိုသင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အချိန်ကျပြီ။
သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး ဂိုဒေါင်ဒီဇိုင်း
သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အအုံသည်ယေဘုယျအားဖြင့်စီးပွားရေးနှင့်အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းအဖြစ်သင့်ဂိုဒေါင်ကိုဆောက်လုပ်ပြီးစက်မှုနှင့်လူထုအဆောက်အအုံများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာသံမဏိကုန်လှောင်ရုံဒီဇိုင်းကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးသင်၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ သံမဏိအပိုင်းများကိုပုံစံမျိုးစုံနှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးဖြင့်ထုတ်လုပ်လိမ့်မည်။
သံမဏိဂိုဒေါင်သည်ဘောင်အဆောက်အအုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ဘောင်ဖွဲ့စည်းပုံမှာသံမဏိထုပ်များနှင့်ကော်လံများဖြစ်သည်။ သံမဏိကိုယ်ထည်ကိုအပူသို့မဟုတ်အအေးဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ခေါင်မိုးနှင့်နံရံ panel အတွက်သံမဏိပြား၊ ဖိုင်ဘာဖန်၊ PU အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ပြားရွေးစရာများစသည်။ ကွေးသောသတ္တုခေါင်မိုးဖွဲ့စည်းပုံသည်သင်၏စီမံကိန်းအတွက်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး ဂိုဒေါင်၏တံခါးနှင့်ပြတင်းပေါက်ကို PVC သို့မဟုတ်လူမီနီယံသတ္တုစပ်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ purlin အထောက်အကူပြုစနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ နံရံနှင့်ခေါင်မိုး purlin, သင်ရွေးချယ်ရန် C-type နှင့် Z အမျိုးအစားရှိသည်။ ထို့အပြင် crane လေယာဉ်ပြေးလမ်းရောင်ခြည်သည်သင်၏ overhead crane parameter အရဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
သင်၏သံမဏိဂိုဒေါင်အတိုင်းအတာနှင့်ဒေသပတ် ၀ န်းကျင်အခြေအနေများအတွက်သင်၏လိုအပ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ သံမဏိဂိုဒေါင်ကိုမည်သည့်ပုံစံနှင့်အရွယ်အစားမဆိုသင့်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီပုံစံပြုနိုင်သည်။
1. ထိရောက်သောကုန်ကျစရိတ်။ ရိုးရာကွန်ကရစ်အဆောက်အအုံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသံမဏိဂိုဒေါင်ဆောက်လုပ်ရေးသည်များသောအားဖြင့်နည်းသည်။ အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကိုစက်ရုံတွင်ထုတ်လုပ်မည်၊ တူး။ ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ဂဟေဆော်သောအစိတ်အပိုင်းများအပါအ ၀ င်စက်ရုံတွင်ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်ပြီးဆောက်လုပ်ရေးကာလကိုများစွာလျှော့ချမည်ဖြစ်သည်။
2.Greater အစွမ်းသတ္တိ။ သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး ဆောက်လုပ်ခြင်းသည်ခိုင်ခံ့သောသံမဏိပြားများနှင့်သံမဏိပြားများဖြင့်အစားထိုးသည်။
3. ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။ သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး ၏သိုလှောင်ရုံသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောကြောင့်အခြားစီမံကိန်းများတွင်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဆောက်လုပ်ရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်သည်။
4. လွယ်ကူသောတပ်ဆင်။ ဤသံမဏိဂိုဒေါင်များကိုအလုပ်သမားများအလွယ်တကူတပ်ဆင်ပြီးစိုက်ထူနိုင်သဖြင့်လုပ်သားနှင့်အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေသည်။
5.High အကြမ်းခံ။ သံမဏိကိုယ်ထည်သည်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာကြမ်းတမ်းသောအခြေအနေများကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးမီးခံဆေးနှင့်အလူမီနီယမ်ဒြပ်ပေါင်းများဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားခြင်းဖြင့်မီးနှင့်သံချေးကိုထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်လုပ်ငန်းသက်တမ်းကိုကြာရှည်စေသည်။
6.High ယုံကြည်စိတ်ချရ။ သံမဏိကိုယ်ထည်သည်သက်ရောက်မှုနှင့်တက်ကြွသောဝန်များကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးကောင်းမွန်သောငလျင်စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်သံမဏိ၏အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံသည်တစ်ပုံစံတည်းဖြစ်သည်။